Agromart | Agricultural Marketplace Nepal भिण्डी खेती गर्ने तरिका – Agromart
भिण्डी खेती गर्ने तरिका
Q 1. भिण्डी फल सकेसम्म ताजामै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो तर भण्डारण गर्नुपर्ने वखतमा कस्तो तापक्रम र आर्दतामा भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
Q 2. कहिले काँही भिण्डी खेतीमा पुरै सेतो धुलोले ढाक्नु र बिरुवा क्रमशः सुक्दै जान्छन् किन ? यसको रोकथाम कसरी हुन्छ ?
यो ढुसीबाट हुने रोग हो । पातको तल्लो सतहमा सेतो वा कैलो रंगका थोप्लाहरु देखिन्छन् पछि गएर डाँठमा समेत सेतो खरानी जस्तो ढाक्दछ । यसको व्यवस्थापन क्याराथेन २–३ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा मिसाई पातहरु राम्ररी भिज्ने गरी छर्नुपर्दछ ।
Q 3. भिण्डी बालीमा अन्तरवाली लगाउन उपयुक्त होला/नहोला ? अन्तरवाली लगाउदा कस्ता वालीहरु छनौट गर्नुपर्दछ ?
Q 4. अर्का अनामीका जातमा विशेष के गुण मौजुद छ ?
Q 5. पहेँलो मोज्याक रोग सहन सक्ने जात कुन कुन हुन् ?
Q 6. पुयस जातका वोटहरु टाढा १.५. देखि २ मीटरसम्म अग्ला, झुस नभएका र हाँगा कम लाग्ने खालका हुन्छन् । पात र हाँगा आउने जोर्नीमा रातो देखिन्छ । फल गाढा हरियो रंगको हुन्छ।सा सावनी जातको विशेषता के हो ?
Q 7. नेपालमा खेती गरिएका उन्नत जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 8. प्रति रोपनी जमीनबाट कति उत्पादन लिन सकिएला ?
Q 9. टाढाको बजारमा पठाउने भिण्डी फल के मा प्याकिङ्ग गर्दा राम्रो हुन्छ ?
Q 10. फल कुन समयमा टिप्न उपयुक्त हुन्छ र टिपी सकेपछि कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्दछ ?
Q 11. भिण्डीको ग्रेडिङ्ग कसरी गरिन्छ ?
Q 12. भिण्डी फल कस्तो अवस्थामा टिप्नु पर्दछ ?
Q 13. फड्के कीरा लागेको कसरी थाहा हुन्छ ? यसबाट वच्न के उपाय छ ?
Q 14. छिर्के गवारोले भिण्डीमा कसरी नोक्सानी पू¥याउँछ ? यसको रोकथाम कसरी गर्नुपर्दछ ?
छिर्के गवारको वयस्क तथा लाभ्रे दुवैले नोक्सान पुर्याउँछन् । लाभ्रेले विरुवाको मूना, कोपिला, फूल, चिचिला र फलमा प्वाल पारी नोक्सानी गर्दछ तर प्रकोप वढी भएमा साईपरमेथ्रिन विषादी १–२ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई २–३ पटक छर्नु पर्दछ ।
Q 15. भिण्डीको पात पहेलिने रोग के कारणले लाग्दछ ? यसबाट वच्न कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ?
Q 16. भिण्डी खेतीमा मल्चिङ्ग (छापो) दिँदा कुन कुन सामाग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
Q 17. भिण्डीबालीमा उप्केरा दिन किन जरुरी हुन्छ ?
Q 18. भिण्डी वालीमा कुन अवस्थामा सिचाईको बढी महत्व हुन्छ ?
Q 19. बीउ रोपेको कति समय पछि टप ड्रेसिङ्ग गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
Q 20. बीउ रोप्ने दूरी हिउँद र वर्षामा फरक पर्दछ ?
Q 21. प्रति रोपनी जमीनमा भिण्डी खेती गर्दा कति बीउ प्रयोग गर्नुपर्दछ ?
भिण्डी खेती गर्दा मौसम हेरी ५००–१००० ग्राम प्रति रोपनी वीउको आवश्यकता पर्दछ । वर्षातको समयमा ५००–६०० ग्राम वीउ भए पुग्छ भने हिउँदमा गरिने खेतीमा १ के.जी. सम्म जरुरी हुन्छ ।
Q 22. भिण्डी खेती गर्दा जग्गाको तयारीमा कत्तिको ध्यान दिनु जरुरी छ ?
Q 23. भिण्डी खेतीमा मलखाद कसरी प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ?
मलखाद प्रयोग गर्दा गोवर/कम्पोष्ट मल वीउ रोप्नु भन्दा २–३ हप्ता अगाडीनै जमीन तयारीको वेला, डि.ए.पी. र पोटास तथा यूरियाको आधा भाग जग्गाको अन्तिम तयारीको वेला तथा आधा भाग यूरिया विरुवा उमे्रर हुर्कन लागेको वेला र वाँकी भाग फूल फूल्न थाले पछि वोट वा वरीपरी हाल्नु पर्दछ ।
Q 24. व्यवसायिक खेतीको लागि मलखादको मात्रा कति दिनुपर्दछ ?
Q 25. भौगोलिक क्षेत्र अनुसार वाली लगाउने समय र जातहरु के के छन् ?
Q 26. यसमा रहेको चिल्लो पदार्थ के के मा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
Q 27. भिण्डीको सेवनबाट धेरै रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ भनिन्छ ती कुन कुन हुन् ?
Q 28. भिण्डीको प्रयोग कुन कुन रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
Q 29. भिण्डीमा प्राप्त हुने मुख्य मुख्य सक्रिय तत्वहरु कुन कुन हुन् ?
Q 30. भिण्डी खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
Q 31. भिण्डी खेतीको लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?
भिण्डी उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रको तरकारी वाली हो । यस समूहका वालीहरुलाई गर्मी आदर्ता हावापानी र घाम लाग्ने मौसमको आवश्यकता पर्दछ । यसले तुषारो विल्कुलै सहन सक्तैन । यसको वोटको वृद्धि, फुल्ने तथा फल्नको लागि २५–३० डि. से. तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ ।